Tootsies & The Fake (2020) | MM Movie Store
ကဲ တှတျစီလေးတှေ လာပါပွီဇာတျလမျးတှဲတုနျးက တသောသောနဲ့ ရယျခဲ့ရတဲ့ အခှီတဈလိုငျး ဇာတျလမျးလေးဒီတဈခါရော တှတျစီလေးတှေ ဘာတှမြေား လုပျကွဦးမလဲ?????နာမညျအတိုငျးပါပဲဇာတျလမျးအစကတညျးက မှလေိုကျတာ . ဇာတျလမျးပွီးတဲ့အထိ ပါးစပျမပိတျရအောငျခှီနရေတဲ့ ထိုငျးကား အလနျးစားလေးပါ။
ဖွဈလိုကျတဲ့ ပေါကျကရတှဆေိုတာ မနညျးဘူးရယျသူတို့ကွောငျ့ မငျးသမီးတဈယောကျ မတျောတဆမှုတဈခု ဖွဈသှားပါတယျဒါကို သူတို့ တာဝနျယူ ဖွရှေငျးရပါတော့တယျ။ဘယျလိုဖွရှေငျးကွမလဲ?????အယောငျဆောငျ ဆိုတာက ဘယျလို ပျေါလာတာလဲ? ဇာတျလမျးထဲမှာ ဆကျကွညျ့ကွပါခငျဗြာ။
ထိုငျးတှရေဲ့ မကျြနှာကိုပွုပွငျတဲ့ စကေးတှကေိုပါ ထညျ့ပွသှားတာ ခှီနရေပါတယျ။တဈခုပွောခငျြတာကတော့ ပေါကားမဟုတျဘူးဆိုတာပါပဲ။အခှီကား ဆိုပမေယျ့ မကျဆဂြေျ့တှကေလညျး ပေးသှားပါသေးတယျ။ပွောရငျ စပှိုငျး ဖွဈမှာစိုးလို့ တသောသောနဲ့ ရယျမောရငျး ဒရာမာအခြိုးအကှလေ့ေးတှကေိုလညျး ခံ့စားလိုကျကွပါစို့။
ကဲ တွတ်စီလေးတွေ လာပါပြီဇာတ်လမ်းတွဲတုန်းက တသောသောနဲ့ ရယ်ခဲ့ရတဲ့ အခွီတစ်လိုင်း ဇာတ်လမ်းလေးဒီတစ်ခါရော တွတ်စီလေးတွေ ဘာတွေများ လုပ်ကြဦးမလဲ?????နာမည်အတိုင်းပါပဲဇာတ်လမ်းအစကတည်းက မွှေလိုက်တာ . ဇာတ်လမ်းပြီးတဲ့အထိ ပါးစပ်မပိတ်ရအောင်ခွီနေရတဲ့ ထိုင်းကား အလန်းစားလေးပါ။
ဖြစ်လိုက်တဲ့ ပေါက်ကရတွေဆိုတာ မနည်းဘူးရယ်သူတို့ကြောင့် မင်းသမီးတစ်ယောက် မတော်တဆမှုတစ်ခု ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကို သူတို့ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရပါတော့တယ်။ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?????အယောင်ဆောင် ဆိုတာက ဘယ်လို ပေါ်လာတာလဲ? ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
ထိုင်းတွေရဲ့ မျက်နှာကိုပြုပြင်တဲ့ စကေးတွေကိုပါ ထည့်ပြသွားတာ ခွီနေရပါတယ်။တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ ပေါကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။အခွီကား ဆိုပေမယ့် မက်ဆေ့ဂ်ျတွေကလည်း ပေးသွားပါသေးတယ်။ပြောရင် စပွိုင်း ဖြစ်မှာစိုးလို့ တသောသောနဲ့ ရယ်မောရင်း ဒရာမာအချိုးအကွေ့လေးတွေကိုလည်း ခံ့စားလိုက်ကြပါစို့။